गणतन्त्र भनेको सुधारिएको पञ्चायत त हैन ? - नेपालबहस
गणतन्त्र भनेको सुधारिएको पञ्चायत त हैन ?
| १३:२५:१७ मा प्रकाशित
एकैपटकको प्रहारमा मार्ने भन्दा पटक पटकको आश्वासन देखाएर अझकल्टो या थङ्गथिलो बनाएर मर्न बाध्य बनाउने बढी अपराधी हुन्छ । नेपाली जनतालाई बर्षौसम्म आश्वासन देखाएर आफु उडुस डल्लो परे झैं हसुर्ने लाचार फटाहा नेतृत्वको भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्न अब प्रत्येक घरबाट एकजनाका दरले सडकमा आउन जरुरी छ । दलको झोला बोकेर पिल्सिएका काँधमा मल्हम लगाउँदै यिनै फटाहा, चोर, घुषखोर र जनतामारा साँढेहरुलाई काँधमा जुवा लगाएर बाँझो जमिन जोत्न जरुरी छ ।
जनताले कसरी दुःख गरेर आफु खाई नखाई सरकारलाई कर तिर्दा रहेछन् ? भन्ने कुराको आभास दिलाउन पनि जनताले गतिलो जवाफ दिन जरुरी छ । देश चलाउँछु र देश बनाउँछु भनेर जनता ढाँटेर, देशको ढुकुटी रित्याउनेहरुलाई सवक सिकाउन जरुरी छ । अब नेता भनाउँदा देशले अहिलेसम्म पालेर राखेका साँढेहरुलाई केन्द्रिय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा हैन जनताका खेतबारीमा उभ्याउन जरुरी छ । कहाँ कुलो चाहिएको छ ? कहाँ बाँध बाध्नु परेको छ ? भनेर स्थलगत रुपमै देखाउन जरुरी छ । तिनै नेताले आफैले लिएका ठेक्कामा होस् या तिनकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा तिनकै आसेपासेहरुलाई दिलाईएको ठेक्कामा होस्, कहाँ कहाँ, कति कति अनियमितता भएको छ भनेर सोध्नु परेको छ ।
छोटो समयमा उम्रिएको फोश्रो राष्ट्रवादको अलापले नेताहरुको वास्तविक अनुहार मेकअप सकिएपछिको महिलाको मुहार झै छर्लङ्ग देखिएको छ । कुरा गरेरै देश बनाउनेहरुको ३० औं बर्षसम्मको अथक प्रयासले पल्टा खाएपछि अब नागरिकहरुमा दलहरुप्रतिको विश्वास क्रमशः घटदै गैरहेको छ । देशको राष्ट्रिय अस्मिता, अखण्डता र सार्वभौम विदेशी सामु बेचेर खानु, हजारौं बर्षदेखिको सामाजिक तथा धार्मिक मान्यतामा ठाडो चुनौति दिनु, अनि आफु बिछट्टै राष्ट्रवादी देखिदै नेपाली हुनुको वीरगाथा गाउँदै हिडनु भनेको भीरबाट लडेर मरेकी श्रीमतिको लाश हेर्दै श्रीमती मरे पनि धन्न भगवानले आँखा चाँहि बचाएछन् भन्नु जस्तै हो ।
गाँउगाँउमा मोटरबाटोदेखि बृद्धबृद्धालाई पाँचहजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मेनुफेस्टो पनि के कम आँक्न सकिन्छ र ? आमा दिदीबैनी हो कति बस्छौ दासी भै, सुखको सधैं प्यासी बनेर भन्दै गाउँका सोझासिधा आमाहरुलाई उचाल्ने म्यूजिकदेखि मोजमस्तीसम्मका अभियानहरु अध्ययन गर्दा वर्तमान सरकारका एकपछि अर्को राम्रै राम्रा कामहरुको फेहरिस्त तैयार हुनसक्छ ।
“भुनुनुनु गर्छ भमरा होईन, आकाश पातालका जोक सुनाउँछ तर जोकर होईन । डाक्टरलाई सिकाउँछ दश पास छैन । दरबारमा बस्छ राजा होईन । गफ हान्यो भने चौधै भुवन उज्यालो पार्छु भन्छ तर काम भने सिन्को भाँच्दैन” भनेर आफ्नै देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अर्काले उडाएको देख्दा दया लाग्छ । अनि एकछिन आफै घोत्लिएर मनन गर्छु फेरी हो कि जस्तो पनि लाग्छ । हुन त वर्तमान सरकारले “२५ म” को रणनीति अपनाएको देखिन्छ । उक्त “२५ म” को रणनीतिले राम्रै ब्यापार गरेको पनि देखिन्छ । “२५ म” भित्र पर्ने केही उदाहरणहरुले राम्रै राजनीतिक आम्दानी पनि गरिरहेको देखिन्छ ।
जसमा पहिलो म्याप (नक्सा) जसले देशका महामहिमहरुलाई केही समय ओछ्यानमै बसीबसी धुरन्धुर राष्ट्रावादीको पगरी गुथ्न सहयोग पुर्यायो । दोश्रो मनी जसका लागि सरकारका मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि जस्तोसुकै रणनीति अपनाउन समेत पछि पर्दैनन् । त्यसरी नै क्रमशः मदिरा, मासु, मसल्स, मुडकी, माङ्गमुङ्गरे, मुन्द्रे, मोदीको आशिर्वाद, मदन भण्डारीको फोटो पनि अहिलेको सरकारको अत्यन्तै ठूलो गरिखाने भाँडोको रुपमा लिईएको छ ।
मुनको होलीवाईनले त केही समय निजकै पार्टी पंक्तिमा नै निक्कै ठूलो भुईचालो ल्यायो । म भित्रको राजनीति हेर्ने हो भने अहिले पनि मार्क्सकाे फोटोमात्र हैन माओकै फोटोको वरिपरी अहिलेको राजनीति घुमिरहेको छ । म्यानुपुलेशन गर्नेदेखि मिलिटरी परिचालनसम्मका संभावनाहरु अहिलेको सरकारले बोकेका आशालाग्दा कार्यक्रमहरु हुन । मोहाली सागर भारतलाई जिम्मा दिनेदेखि बढी बोले मारिदिनेसम्मका कामहरुलाई पनि सानो उपलब्धिका रुपमा आँकलन गर्न सकिदैन ।
भोट पाएका भोलिपल्टदेखि नेता हो कि दुष्मन हो छुट्याउदै सकिदैन, भेट हुँदा चूँ सम्म पनि बोल्दैन । भोट हामीले दिने हो ससुराली उस्को बनाउँछ । भोट हाम्रो लान्छ भ्रष्टाचारको गन्धमा उ तीनकोष परसम्म गन्हाउँछ । फेरी नेपाली नागरिकहरु हामी मतदातालाई नै गाली गर्छन् । कस्तालाई भोट हालेको भनेर परैदेखि हामीलाई नै आँखा तर्छन् ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन प्रत्येक सांसदलाई दश कराेड रुपैयाँसम्म दिन सके, दुई चार सेक्यूरिटी प्रेसको जस्तो घोटाला गर्न सके, अझै केही समयसम्म योगेश भट्टराई र भानुभक्त ढकाललाई मन्त्री पदमा अड्याउन सके, ईश्वर पोखरेललाई अरु एक दुई वटा खानेपानीको ट्यांकी जोडिदिन सके, सुकुम्बासी नेताहरुलाई सके बालुवाटार नसके खुमलटारसम्मको घर घडेरी जोडिदिन सके आगामी निर्वाचनमा फेरी दुई तिहाई ल्याउन सकिने ध्याउन्नमै लागिरहेको छ सरकार । यी सबै जनताकै काम त हुन नि कोही बिदेशीलाई यी काम गरिदिएको हैन क्यारे सरकारले ?
अप्ठ्यारो पर्दा मोदीले पार्टी मिलाईदिएका छन् । कतै पार्टीभित्र भित्रै उध्रिई हाल्यो भने यान्सी आएर बेला बेलामा सिलाईदिएकै छिन् । प्रचण्ड कोशी उच्च बाँध भारतको योजनामा बनाउन दिने शर्तमा ढुक्क छन् । आफु हेग जानु भन्दा नेपाली भूमि भारतलाई बुझाएरै भएपनि सत्तामा टिकीरहन मस्त छन् । नेपाली जनताले न दशैं न तिहार सधैं यिनै नेताको आश्वासन खान्छन् । यिनले चुनाव छ है भनेका दिन यिनै भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई भोट हाल्न तातो घाममा लाम लागेर भोट हाल्न जान्छन् ।
लाज, शरम र घिन जस्ता कुराहरु राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अब सामान्य रुघाखोकी झै हो भन्ने भान मात्र परिसक्यो । प्रजातन्त्रका तमाम आधार स्तम्भहरु यी गणतन्त्रका सिपाही हुँ भन्नेहरुले आफै उखेलेर फालिसके । भ्रष्ट र कमिशनखोरबाट मात्रै काम गराउनु पर्ने, देशका बडे बडे राजनीतिक नेतृत्व पनि यिनै भ्रष्ट, दलाल र घुषखोरहरुका अघिपछि हुनु पर्ने कस्तो निकै नहुने खालको रोग लागिसक्यो ।
नगई पनि के गर्नु र भोट हाल्न नगए भरे फेरी यिनैले जनताको भाले सातो खान्छन् । ज्यान भन्दा ठूलो भोट हैन । भोट पाएका भोलिपल्टदेखि नेता हो कि दुष्मन हो छुट्याउदै सकिदैन, भेट हुँदा चूँ सम्म पनि बोल्दैन । भोट हामीले दिने हो ससुराली उस्को बनाउँछ । भोट हाम्रो लान्छ भ्रष्टाचारको गन्धमा उ तीनकोष परसम्म गन्हाउँछ । फेरी नेपाली नागरिकहरु हामी मतदातालाई नै गाली गर्छन् । कस्तालाई भोट हालेको भनेर परैदेखि हामीलाई नै आँखा तर्छन् ।
के हामीले घुष खा भनेर भोट हालेको हो र ? तिम्रा ससुरालीलाई मेयर र श्रीमतिलाई सभासद बनाउ भनेर संसदमा पठाएको हो र ? सासुलाई राजदुत बनाउने संझौतामा अनि पार्टीलाई बदनाम बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्न हामीले मतदान गरेको हो र ? हामी लाचार जनतालाई मात्र कति पेल्छौं ? भ्रष्टाचारी नेतालाई तिमीहरु नै कमिशनका पोका मात्रै कति ठेल्छौ ?? तिमी कमिशन दिन बन्द गर हामी भोट दिन बन्द गर्छौ । अब त यो गणतन्त्र पनि सुधारिएको पञ्चायत झै लाग्न थालिसक्यो ।
नीति, नियम र अनुशासन भन्ने कुरा अर्कै देशतिर बँसाई सरिसक्यो । लाज, शरम र घिन जस्ता कुराहरु राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अब सामान्य रुघाखोकी झै हो भन्ने भान मात्र परिसक्यो । प्रजातन्त्रका तमाम आधार स्तम्भहरु यी गणतन्त्रका सिपाही हुँ भन्नेहरुले आफै उखेलेर फालिसके । भ्रष्ट र कमिशनखोरबाट मात्रै काम गराउनु पर्ने, देशका बडे बडे राजनीतिक नेतृत्व पनि यिनै भ्रष्ट, दलाल र घुषखोरहरुका अघिपछि हुनु पर्ने कस्तो निकै नहुने खालको रोग लागिसक्यो ।
अब त चेत बाबा काँशी भैयो बा । अब फेरी यी हात उठाएर यस्ता देश लुटेराहरुलाई भोट हाल्दै हाल्दैनौ । यिनका फोश्रा आश्वासनमा भर पर्दैनौं । देशलाई धोका दिदैनौं, मेहनत र परिश्रम गर्छौं आफ्नै कमाईले दुईछाक खोले खान्छाै । भोकै बस्छौं, खान नपुगे बरु भोक भोकै सेरिएर मर्छौ ।
सरकारले खर्च गर्ने कर राजश्व नेताको ससुरालीको दाईजो होईन १ हप्ता पहिले
कर्णाली विवाद मिलाउन प्रचण्ड र माधव नेपालबीच छलफल १ हप्ता पहिले
समृद्धिका नाममा लुटकाे साम्राज्य कहिलेसम्म ? २ हप्ता पहिले
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको व्यवसायिक लाभमा अपारदर्शी खर्च २ हप्ता पहिले
नवनियुक्त मन्त्रीद्धारा शपथग्रहण २ हप्ता पहिले
ओली र प्रचण्डबीच १२ दिनपछि भेटघाट, संवादहीनताको अन्त्य ३२ मिनेट पहिले
यस वर्षको तिहारमा छिमेकी मुलुक भारतबाट फूल आयात नहुने ३९ मिनेट पहिले
पुजा र सन्तोषको अभिनय रहेको भिडियो सार्वजनिक ३ घण्टा पहिले
देहरादून घटनाका विद्यार्थीको निःशुल्क उपचारको माग ७ घण्टा पहिले
नरेश र समिक्षाकाे चौतारीमा सोल्टि ज्यु ! पिपलू बर २३ घण्टा पहिले
आज नेपालमा पनि विश्व शहर दिवस मनाइँदै ९ घण्टा पहिले
पूर्वी नवलपरासीका दुई जना संक्रमित मृत्यु ६ घण्टा पहिले
बुवाले चौरासी पूजा गरिदिँदा छोरा निकै खुशी २४ घण्टा पहिले
सलाङघाटमा स्करपियो दुर्घटना हुँदा पाँच जना घाइते २० घण्टा पहिले
नेकपाभित्रको विवाद भुमरीमा बल्झिँदै २ दिन पहिले
आज थप ३५१७ जनामा कोरोना पुष्टि, ४०९६ संक्रमणमुक्त ! २४ घण्टा पहिले
जगत नै हँसायौ मलाई रुवायौ १ दिन पहिले
बारामा प्रहरीकाे गाेली लागेर १४ वर्षीय बालक घाइते, अवस्था गम्भीर २ दिन पहिले
ब्रुनेईका राजकुमार अजिमको असामयिक निधन ७ दिन पहिले
चेन्नई आईपीएल इतिहासमा पहिलोपटक प्ले अफ पुग्न असफल ५ दिन पहिले
बाँकेमा ६५ वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु २ दिन पहिले
शल्यक्रियामार्फत सोमिकाले जन्माइन् एकैपटक ५ वटा बच्चा ४ हप्ता पहिले
कोरोनाले ६ बर्षीय बालकको ज्यान गयो ४ हप्ता पहिले
पृतनालाई कोरोना नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा जुट्न प्रधानसेनापतिको निर्देशन २ हप्ता पहिले
आज घरघरमा शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइँदै १ हप्ता पहिले
परिवारका सदस्यमाझ मात्र दशैँ-तिहार मनाउन आग्रह ३ हप्ता पहिले
क्राईम ब्रान्च भयो बिक्री, सीमामा व्यापक तस्करी २ हप्ता पहिले
ग्लोरी मिडियाद्वारा प्रकाशित “खेल जीत मनोविज्ञान” सार्वजनिक २ हप्ता पहिले
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र पे नेप (मोरु) बीच सम्झौता ४ हप्ता पहिले
शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ छ : गृहमन्त्री थापा ८ महिना पहिले
भारत–नेपाल समस्याको निकास सघन संवादको माध्यमबाट खोजौँ ८ महिना पहिले
प्रदेश सरकारको सहयोगमा पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालन हुँदै २ महिना पहिले